Nnukwu Ugbo ala Indinction Soja na-ere Ọgbọ Aluminom
Ebumnuche nke mgbanye azụ a dị ka waya ruo na alịmịnụ dị n’ime sekọnd 30.
DW-UHF-6KW-III eji aka eji abanye ihe eji eme oku
Ihe mkpuchi omenala HLQ
Ike: 1.75 kW
Okpomoku: odika 250°C (482.)°F)
Oge: 25 sekọnd
Usoro nnweta agha:
Iji malite usoro induction, etinye eriri aka alumini n’etiti eriri igwe. Mgbe ahụ etinye eriri waya nke litz na ya na onye rere ya. Onye rere ya bidoro gbazee mgbe sekọnd iri abụọ na ise dị ihe dịka 25°C (482.)°F). Mgbe onye rere ere ahụ gbazechara kpamkpam, ọ hapụrụ ya ka ọ nọrọ jụụ otu nkeji tupu ị gaba.
Ule ndị ahụ bụ ihe ịga nke ọma. Anyị nwere ike igosipụta nke ahụ itinye n'ọkwa kpo oku bụ usoro dị ngwa ngwa nke ịbanye waya na aluminom n'ụkwụ kama iji ọwa dị ka onye ahịa ahụ mere n'oge gara aga. Nnwale ngwa gosipụtara mmụba na njikwa na oge na ọnọdụ okpomọkụ.
Categories Technologies Tags aluminom waya soldering, nkwonkwo ígwè ntinye, ihe ntanye nke ntanye, ụda mgbakwunye ntinye, RF na-agbanye ala aluminum, soldering aluminom waya itinye, eriri ígwè, soldering waya ka aluminom Mail igodo
Ngwunye agha nke tubes igwe anaghị agba nchara na brass base